PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-08 - “Sizobazojezisa abezikole okuphase u-0% kuzo”
“Sizobazojezisa abezikole okuphase u-0% kuzo”
- wonke umuntu ubebona. Asifuni ukwehlulela abebekhona ngaphambi kwakhe. Engingakusho uzoyiyisa kude imfundo yaKwaZulu-Natal.
YINI eyenze ukuthi nihlulwe yiFree State ephume phambili?
ABAFUNDI baseFree State abebebhala u-matric bangu-25 000 kanti KwaZulu-Natal bebengu-170 000. Kulukhuni ukuqhathanisa ukwenza kahle kweFree State nokungenzi kahle kweKwaZuluNatal ngoba izibalo zabantu azilingani.
NIFUNA ukuphasa kanjani kulo nyaka?
NGEKE ngikwazi ukusho ngoba kusazoba nemikhankaso esizoba nayo yokugqugquzela isiko lokufunda nokufundisa. Mhlambe ngingakwazi ukuphendula kahle ngoJuni uma sesibonile ukuthi kusebenzeka kanjani.
IYIPHI le mikhankaso okhuluma ngayo?
NGEPHASIKA sizoqala imikhankaso yamaBoot Camps. UNISEBENZELA kanjani? ININGI labafundi abaphase kahle bebekumaBoot Camp. Sifuna ukuyiqala kusenesikhathi kulo nyaka. NGIZWA kuthiwa umnyango usabisa ngokuthi uzobaxosha othishanhloko bezikole okufeyilo bonke abafundi ku-matric, kuyiqiniso lokho?
SITHE sizobajezisa othishanhloko bezikole ezithole u-0% ngoba kukhombisa ukuthi abawukhathalele umsebenzi wabo. NIZOBAJEZISA kanjani? SIZOBHEKA ukuthi zize izikole zabo zithole u-0% nje bebekuphi othishanhloko nothisha. Babulala ikusasa lezingane phela.
Okwamanje ngeke ngisho ukuthi sizobajezisa kanjani, ngoba uma ngiyikhulumela eziko izobaleka.
Uzobona, kodwa ukuthi kuzokwenzekani kubona. Sinayo indlela yangaphakathi yokubhekana nalabo thishanhloko.
NGAPHANDLE kokusabisa othishanhloko, inkinga idalwa yini yokungaphasi kwalezi zikole?
KUNOTHISHANHLOKO abanyamalala ezikoleni zabo amasonto bengaziwa ukuthi bakuphi. Sizokuqeda lokho ngoba kungenye yezimbangela zokungenzi kahle.
ZIMI kanjani izinhlelo njengoba kuqala unyaka?
UNOMKHANKASO wokuthi kubuyelwe ezikoleni, uzovele atheleke kunoma yisiphi isikole ayobheka ukuthi kuyafundwa yini.